Shukulaatada Shukulaatada Caddaan + Casharrada Fiidiyowga - Dhaxan-Qaboojin Iyo Iicil
Cunto Shukulaatada Cunnada Ganache
Shukulaatada Shukulaatada Caddaan ee Caannada ah ee ku filan in lagu dubo keega iyo dhadhanka macaan!
sidee ukun u karisaa
Ganache shukulaatada cad waxay u shaqeysaa si fiican u sameynta dhibco kaamil ah keega, adoo u isticmaalaya muraayad ama barafaynta keegaga halkii aad ka heli lahayd buttercream si aad u hesho dhadhan vanilj oo aad u deggan oo loogu talagalay in lagu isticmaalo meelaha kuleylka / huurka badan. Ma ogtahay ganache shukulaatada cad inuusan dhididin? SO muhiim ayey u tahay maalmahaas qoyan.
Shukulaatada Caanga ah Ganache Frosting
Waxaan qirayaa inay igu qaadatay waqti aad u dheer inaan si buuxda u fahmo sida loo sameeyo ganache shukulaatada cad iyo xitaa ka sii dheer si loo ogaado sida loo sameeyo si fiican. Marwalba waxaan dareemayay inay runti sifiican ugashaqaynayso kuwa kale waxaanan si uun uwaayay sirta samaynta ganache kaamil ah. Waxay ahayd mid aad u jilicsan, badar ama aad u adag! Waa maxay sirtu?
Waxaa soo noqday, sirta sameynta ganache kaamil ah waa waqti. Waqtigu waa wax walba! Ganache waxaa laga sameeyaa shukulaatada shukulaatada waa mid aad u xasaasi u ah heerkulka. Kuleyl aad u badan waana dhibco qulqulaya. Aad u qabow waana dhagax adag. Waxaad ubaahantahay inaad adeegsato ganache waqtiga saxda ah.
Marka ugu horeysa ee aad sameysatid ganache waa mid aad u jilicsan oo dareere ah. Tani waa waqtigii ugu habboonaa ee loo isticmaali lahaa in lagu sameeyo dhibco keegaaga faleebada ah ama muraayadda keeggaaga qabow sida tayda oo kale keega unicorn .
Markaad u oggolaatid ganache shukulaatada cadcad in yar fadhiiso, subagga kookaha ayaa bilaabmaya inuu adkaado oo joogtayntu waxay u egtahay sida subagga lowska. Si loo dedejiyo howshan, waxaan helay talo ka timid saaxiibkey Cynthia oo ka socota Caked By Cynthia. Waxay si gaar ah ula shaqeysaa ganache iyada oo kuleylkeeda / aaggeeda qoyan ee Miami, Fl. Waxay igu tiri ganacsatadeyda ku shub saxan gacmeed si ganacheyadu dhaqso ugu qaboobaan. Wadarta badalida ciyaarta.
Ganache waxaa loo dejiyaa ilaa 20 daqiiqo ilaa saacad iyadoo kuxiran sida qabow uu u yahay qolkaaga hada ganacheyahaagu wuxuu diyaar u yahay inuu barafeeyo keegaaga!
Haddii ganache-gaagu aad u adag yahay, kaliya microwave 10 ilbiriqsi oo walaaq ilaa uu jilco. Ka taxaddar inaadan kululeynin badan ama waxaad u kala qaybin kartaa ganache-gaaga waana inaad sugto inta ay ka qaboojineyso mar kale.
Sida Loo Sameeyo Ganache Shukulaatada Caan Kaamil ah
Sameynta ganache shukulaatada cad waa mid fudud. Waxaan miisaamayaa shukulaatada (isticmaalka cabirka ayaa ka fiican isticmaalka koobabka si sax ah) oo waxaan dhigaa maddiibad cadeynaysa kuleylka. Waxaan microwave 1 daqiiqo ah si aan u bilaabo jilicsanaanta shukulaatada.
Ka dib waxaan u keenayaa kareemka kariimka oo aan ku shubaa dusha sare ee shukulaatada.
Hubso in shukulaatadaada uu daboolo kareemka. Isku dar iskudhafka 5-10 daqiiqo ka dib isku kari ilaa inta la isku darayo.
Waxaan ganache ku shubay digsi keega ah si aan u adkeeyo. Qaaday ilaa hal saac aniga.
Ku dabool ganache-gaaga waxoogaa balastar ah (sidaa darteed waxay taabaneysaa dusha sare ee ganache) si looga ilaaliyo filim inuu soo baxo oo sababi kara in ganache-gaagu noqdo mid firida.
Marka ganache uu joogo joogitaanka subagga lowska, waad u adeegsan kartaa inaad ku barafeeysid keegaaga.
Muddo intee le'eg ayaad haysan kartaa Shukulaatada Shukulaatada Ganacha
Guud ahaan, ganache shukulaatada cad ayaa lagu hayn karaa heerkulka qolka illaa laba maalmood laakiin markaa waxay u baahan tahay in la qaboojiyo intaas ka dib. Noolaha waxay u baahan yihiin biyo si ay u koraan ganacsataduna inta badan waa sonkor iyo dufan sidaa darteed waa quruxsan tahay shelf-deggan. Wuu kala bixi karaa waqti kadib inkasta oo markaa ay ugufiican tahay inaad qaboojiso markaad isticmaaleysid.
Had iyo jeer waxaan ku keydsadaa ganache-gayga xijaab balaastig ah oo taabanaya dusha sare si aan uga hortago filim sameysmo. Ka dib waxaan ku kululeynayaa microwave-ka si aan u jilciyo una walaaqo ilaa inta kareemka la isticmaalayo ka hor.
Muxuu Yahay Shukulaatada Ganache Glaze Iyo Drip Recipe
Si aad ugu dallacdo keegaaga ganache, waxaa muhiim ah inaad sugto illaa ganacetadaadu qaboojiso ilaa 90 ℉. Waxaad ku shubi kartaa ganache dusha sare ee keegaaga qabow iyo la qaboojiyey ee dahaadh aad u dhalaalaya oo dhadhan fiican leh!
Waxaan u isticmaalaa isla nidaamka sameynta dhibco kaamil ah keega! Ama waad isticmaali kartaa biyo ganache kaas oo leh saamiga sare ee dareeraha iyo shukulaatada laakiin wuxuu ku fiican yahay qanjaruufo markaad ilowdo inaad dukaanka ka iibsato kareem (dambiile).
Saamiga Shukulaatada Cadaan ee Ganache
Waxaad badanaa maqli kartaa dadka oo ka hadlaya saamiga sida 3: 1 ama 4: 1. Tan macnaheedu waxa weeye xaddiga shukulaatada ay ku kareemka karinta ku jirta. Sababta loogu muujiyay saamiga ayaa ah maxaa yeelay waxay kuxirantahay inta shukulaatada aad haysato waxay qeexaysaa inta kareem ee aad darto. Sidan ayaa loo karin karaa waxa aad u baahan tahay.
Inta badan waxaan raacaa saamiga 3: 1 ee ganache shukulaatada cad oo soo saarta ganache kareem leh laakiin si cadaalad ah u adag. Tusaale, 3 lbs oo shukulaato cad ah iyo 1 lb oo kareem ah. Anigu kuma joogo meel aad u kulul inkasta oo haddii aad ku sugan tahay aag aad u kulul / qoyan, waxaad u raaci kartaa saamiga 4: 1 sidaa darteed waxaa jira shukulaato badan oo ku jirta cuntada.
Nooca shukulaatada aad isticmaasho sidoo kale waxay saameyn ku yeelan kartaa sida ay u adagtahay shukulaatadaada. Isticmaalka shukulaatada dhabta ah waxay keeneysaa shukulaato adag. Isticmaalka nacnaca nacnaca wuxuu sababi doonaa shukulaato jilicsan markaa ku ciyaar agagaarka saamigaaga si aad u aragto waxa adiga kuu shaqeynaya. Markaad hesho saamiga aad jeceshahay, ku dhaji isla nooca shukulaatada natiijooyinka ugu habboon.
sida loo sameeyo sanduuqa casaanka velvet ee dhadhanka macmacaanka ah
Sidee Loo Midabeeyaa Ganacha Shukulaatada Ganache
Waxa ugu weyn oo ku saabsan ganache shukulaatada cad ayaa ah inaad durba ku dartay dareere shukulaatadaada si aad u sameysid emulsion taasoo keenta ganache. Uma baahnid inaad ka walwasho shukulaatadaada 'qabashada' adoo ku daraya midabaynta cuntada. Waad ku dari kartaa wax kasta oo midabaynta cuntada ah ee aad jeceshahay ganache-kaaga inuu midabeeyo laakiin haddii aad rabto xoogaa midabbo runti hodan ah oo dhalaalaya, waxaan aad ugu boorinayaa isticmaalka lahjadaha farshaxanimada midabada chameleon kuwaas oo loo sameeyay midabaynta shukulaatada. Waxay sidoo kale si fiican ugu shaqeeyaan caano-biyoodka!
Ma jeceshahay buttercream laakiin waxaad rabtaa xasilloonida ganache? Ka hel labada ugu fiican adduunka karinta shukulaatada cad cad ! Shukulaatada cad waxay ku darsataa dhadhan vanilj delish laakiin sidoo kale waxay ka caawisaa subagga qulqulka in yar oo ka xoog badan kan dhaqameed subag macaan.
Sida Loo Sameeyo Ganache Shukulaato Kaamil ah
Hadaad rabto inaad xoogaa mugdi ka dhigto shukulaatada ganache , waxaan sidoo kale u heysanaa raashin aad u wanaagsan! Waan jeclahay isticmaalka ganache shukulaatada loogu talagalay fudgy buuxinta keegayaga ama ku darista xasilloonida weyn ee keega dufanka iyo farshaxanka ah.
Casharka Kooban ee Shukulaatada Ganache
Fiiri fiidiyowgayga ku saabsan sida loo sameeyo ganache shukulaatada cad!
Baro sida loo sameeyo ganache shukulaato cad oo deg deg ah oo fudud oo loo adeegsan karo abuurista dhalaal aan iin lahayn ama dhaxan siman oo macaan. Waqtiga Diyaarinta:5 daqiiqado Waqtiga karinta:10 daqiiqado Wadarta Waqtiga:shan iyo toban daqiiqado Kalori:2224kcal
▢8 oz (227 g) Kareem culus
Shukulaatada microwave ee ku jirta weelka nabdoon ee microwave 1 daqiiqo si aad u jilciso
Keen kareem culus oo karbaash ah isku kari ilaa ka dibna ku shub shukulaatada
Hubso in shukulaatada si buuxda loo daboolay
U daa ilaa 5 daqiiqo
Si tartiib ah u laaq si aad isugu darto kareem iyo shukulaato, ha ku darin hawo
U isticmaal ganache cusub oo la sameeyay faleebooyin (hubi in keeggaagu uu aad u qabow yahay markaa ganache dhaqso ayuu u dejiyaa)
Ku shub digsi gacmeed ama saxan si ay u adkaato. Ka dib walaaq ilaa kareemka ka hor intaadan dubin keegaaga. Haddii ganache aad u adag yahay, microwave 10 sekan si aad u jilciso ka dibna walaaq ilaa ganache ay tahay joogteynta la doonayo.
Kalori:2224kcal(111%)|Kaarboohaydraytyada:204g(68%)|Protein:22g(44%)|Dufan:151g(232%)|Dufan Dufan:92g(460%)|Kalastarol:226mg(75%)|Sodium:349mg(shan iyo toban%)|Kaliumperyamper:1058mg(30%)|Sonkor:200g(222%)|Vitamin A:1770IU(35%)|Vitamin C:2.4mg(3%)|Kaalshiyam:751mg(75%)|Bir:0.8mg(4%)
keega strawberry laga soo bilaabo xoq leh jello
sida loo sameeyo qalin dhalaal dhalaal ah
sida loo dhaqmo ilaa keega la isku daro